Xiddiga Arsenal, Ainsley Maitland-Niles oo hooyadii ku rafaadsan London: Sawirro – Warfaafiye:
Xiddiga Arsenal, Ainsley Maitland-Niles oo hooyadii ku rafaadsan London: Sawirro
Ali Mohyadin Mar 6, 2018 0
Warbaahinta ugu caansan UK ayaa soo bandhigay muuqal fadeexad ku noqotay xiddiga da’da yar ee kooxda Arsenal Ainsley Maitland-Niles, kaasoo hooyaddiis ay ku rafaadsan tahay magaalada London oo hoy la’aan xun ay hayso.
Xiddigaan u ciyaara kooxda Arsenal ayaa todobaadkii mushaar ahaan u qaata £30,000 oo lacagta UK, halka hooyadiis Jule Niles qabowga daran ee dhacaaya ku nooshahay container aan la laheyn dariishad iyo musqul intaba. Wiilkeeda Ainsley Maitland Niles wuxuu dagan yahay guri isku xiran oo lagu sheegay qiimo ahaan 700,000 kun oo Pound isagoo la mataan ah walaalkiis Cordi, waliba xaafadda Finchley ee ku taalla waqooyiga London.
“Waa qol ka sameysan bir kaas aan laheyn Albaab iyo roog, ma lahan musqul ama agabka wax lagu dhaqdo” ayey u sheegtay wargeyska The Sun.
“Wiilkeyga Ainsley wuu ii ibis karaa guri aan seexdo isagoo ii huraya mushaarkiisa laba isbuuc oo kaliya” ayey sii raacisay. “Wiilkeyga wuxuu u ciyaaraa Arsenal, waxaana ahay guri la’aan seexata bakhaar” ayey sidoo kale u sheegtay wargeyska.
“Waxba uma arki doono hadii Ainsley uu lumiyo berito lacagtiisa oo dhan, isaga iyo Cordi waa wiilasheyda waana jeclahay, waxaan kaliya rabaa inaan midaas ogeysiiyo” ayey tiri Jule Niles.
Ainsley jaxanjax uma arko qeyla dhaanta iyo darxumada haysata hooyada dhashay, waxayna isaga iyo walaalkiis Cordi ku jiraan hawo adduun iyo raaxaysi.